Eduardo Paes: Ireo fitsipika 4 mikasika ny tanàn-dehibe | Video on TED.com
Talks	Eduardo Paes: Ireo fitsipika 4 mikasika ny tanàn-dehibe
Voninahitra lehibe ho ahy ny mijoro eto.
Voninahitra lehibe ho ahy ny fahazoako miresaka ireo tanan-dehibe,
ny miresaka ny hoavin'ireo tanan-dehibe.
Voninahitra lehibe ho ahy ny mijoro eto amin'ny maha ben'ny tanana ahy.
Inoako tokoa fa ny ben'ny tanana dia manana toerana politika ahafahany
manova marina ny fiainan'ny olona.
Eto no tokony hijoroana.
Ary mahafinaritra ny mijoro eto amin'ny maha ben'ny tananan'ny Rio ahy.
Rio dia tanan-dehibe mahafinaritra,
toerana feno fiainana, toerana hafa kely
Amin'izao fotoana izao ianao dia mijery lehilahy
manana ny asa tsara indrindra eran-tany.
Androany aho dia hizara aminareo
fotoana manan-tantara tamin'ny fiainako
ary koa ny tantaran'ny tananan'i Rio.
(Video) Mpanolotra: Amin'izao fotoana izao, tompokolahy sy tompokovavy,
ny valopy misy ny valiny.
Jacques Rogge: Voninahitra ho ahy ny manambara
fa ny Lalao Olimpika faha- 31
dia hatao ao amin'ny tanànan'i Rio de Janeiro.
EP: Eny, mampihetsi-po tokoa, ary tena manohina,
fa tsy mora ny nahatongavana tamin'izany.
Eto aho dia milaza fa fanamby lehibe tokoa no nahazoana izany.
Nila nandresy ny fanjakan'ny eropeanina.
Indro i Juan Carlos, mpanjakan'i Espagne.
Tsy maintsy nandresy ny firenena matanjaka japoney sy ireo teknolojiany izahay.
Tsy maintsy noresena ihany koa ny lehilahy mahery indrindra eran-tany
izay miaro ny tananany
Tsy azo lazaina hoe mora izany.
Ary ity farany dia nilaza izao fehezan-teny izao taona vitsivitsy lasa izay
izay inoako fa mifanentana tsara amin'izao
fahazoan'i Rio ny fifidianana ny tanàna handray ny Lalao izao.
Nasehonay fa, "Yes, we can" [Eny, Vitatsika]
Ka indro ary ny antony maha eto ahy androany hariva.
Tonga eto aho androany hariva hitantara aminareo
fa azo atao ny zava-drehetra,
tsy ilana akory ny fananana harena na ny hery
ahatratrarana ny tanjona,
ny filazana fa mila fanamby goavana ny tanan-dehibe.
Sarotra ny miasa ho an'ny tanan-dehibe.
Fa misy kosa fomba miavaka
miaraka amin'ny fametrahana didy tsotra,
afaka tokoa ianareo manova ireny tanan-dehibe ireny
ho tanana maha-tamàna.
Tiako alainareo sary an-tsaina i Rio.
Eritreretinareo angamba fa tanàna mihetsiketsika,
tanàna feno fiainana ary maitso.
Ary tsy nisy olona afaka nampiseho tsara izany
toy i Carlos Saldanha tao amin'ny sary mihetsika mitondra ny lohateny hoe "Rio", tamin'ny taona lasa.
(Video) Vorona: Tsy mampino
EP: Eny, ny ampahany sasan-tsasany amin'ny Rio dia toy izao
fa tsy izy rehetra.
Izahay dia toy ny tanàna rehetra eran-tany.
Maro be ny mponina aty aminay,
ny loto, ireo fiarakodia, ireo varafasy.
Ireo sary nasehoko taminareo ireo,
dia sarin'i Madureira.
Hoatran'ny hoe fon'ny zanabohitr'i Rio.
Ary eto aho dia hanome ohatra misy eto Rio
zavatra hataonay any Madureira, amin'ity faritra ity
ahitantsika izay ho tokony ho adidy voalohany ho raisina.
Isaky ny mahita ala mikitroka vita amin'ny simenitra matevina toy itony,
ny tokony atao dia mitady toerana malalaka
Raha toa ka tsy misy toerana malalaka
dia mila mankany an-toerana manokatra izany.
Mankanesa amin'ireny toerana malalaka
ary ataovy izay ahafan'ny olona mankany
sy mampiasa izany toerana izany.
Ho lasa toeram-pilalaovana lehibe indrindra faha-telo eto Rio
amin'ny volana Jiona hoavy izao.
Ho toerana ahafahan'ny olona mihaona,
ho toerana hisy zavaboary.
Hiiba roa na telo degre ny mari-pàna
tiako hapetraka aminareo androany hariva
dia ny hoe, ny tanan-dehibe hoavy
dia tokony haha-tamàna eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana.
Isaky ny mieritreritra tanàn-dehibe ianareo,
dia tokony ho zava-maitso ny ao an-tsaina.
Mila mieritreritra zava-maitso ary zava-maintso hatrany.
Hiroso amin'ny fanapahan-kevitra faharoa izay tiako haseho aminareo aho.
Eritrereto hoe ny tanàn-dehibe dia nohon'ny mponina ao aminy,
olona maro an'isa.
Ny tanàn-dehibe dia feno olona.
Arak'izany, ahoana ny fomba hifaneraseran'ireny olona ireny ?
Raha fantatra fa telo faingo dimy lavitr'isa no isan'ny olona miaina an-tanàn-dehibe --
amin'ny taona 2050, dia ho 6 lavitrisa izany.
Ka, isaky ny mieritreritra ny fivezivezen'ireo olona ireo ianareo,
dia mila fomba fifamoivohizana mahazaka olona maro.
Nefa misy olana.
Ny fananana ireo fitaovam-pifamoivoizana mahazaka olona maro ireo dia midika
Ny ho asehoko anareo eto
dia zavatra efa naseho teto amin'ny TED ihany,
nasehon'ny ben'ny tanànan'i Curitiba teo aloha
izay namorona ity, tanàna iray eto brésil, Jaime Lerner.
Io zavatra io ihany no averinay eto Rio.
Io no antsoina hoe BRT, na koa "Bus Rapid Transit".
Misy Bus any aminareo. Izy ity dia toy ny bus rehetra izay efa fantatry ny olona rehetra.
Ny ao anatiny dia ovaina ho kalesin-dalamby.
Mampiasa zotra misaraka, zotra izay efa voatokana.
Ny mpandraharaha, tsy dia tia loatra azy ity.
Tsy dia mila mangady lalina loatra.
Afaka manamboatra fiantsonana mahafinaritra.
Ity ohatra dia misy toerana fiantsonana izay amboarinay ao Rio.
Averiko indray mandeha, tsy dia ilaina ny mangady lalina loatra
raha hanao toerana fiantsonana toy itony.
Ity fiantsonana ity dia mitovy hatsarana, mitovy zava-bita
amin'ny fiantsonana "métro"
Iray kilometatra amin'io anefa dia am-pahafolon'ny vidin'ny métro.
Tsy dia mandany vola betsaka, kanefa mahavita haingana kokoa,
afaka manova marina ny fivezivezen'ny olona.
Indro misy sarintanin'i Rio.
Ireo làlana rehetra, ny làlana rehetra miloko hitanao eto,
dia tamba-jotra fitanterana mahazaka olona maro.
Amin'izao fotoana izao,
dia mitatitra 18% n'ny mponina misy ao aminay izahay
amin'ny alalan'ireo fomba fitanterana mahazaka olona maro ireo
Miaraka amin'ny BRT izay ataonay,
marihiko eto indray, fa mora vidy sy haingam-pandeha,
hisondrotra 63% ny mponina
ho tanterina amin'itony fomba fitanterana mahazaka olona maro itony.
Tadidio ny teniko teo:
Tsy ilaina akory ny manan-karena sy matanjaka
Afaka mahita fomba hafa ianao hanaovan-javatra.
Ny didy faharoa homeko anareo androany hariva
dia, ny tanànan'ny ampitso
dia mila miatrika ny fitanterana ny olona rehetra
monina ao aminy.
Hojerentsika ny didy fahatelo.
Izy ity no miteraka ny ady hevitra betsaka indrindra.
ary mahakasika ny faritra iva, ireo fokontany mahantra
antsoy amin'izay tianareo iantsoana azy, omena anarana isan-karazany izy ireny eran-tany.
Fa ny tiana hotsipihina eto androany
dia: tsy voatery ho olana ireny faritra iva ireny.
Ny tiako ho lazaina dia izao, ny faritra iva ihany koa
dia mety ho vaha-olana,
raha toa ka karakaraintsika izy ireny,
raha toa ka asiana mpitandro ny filaminana amin'ireny faritra iva ireny.
Aleo asehoko anareo amin'ny sarintany.
Rio dia misy mponina 6,3 tapitrisa--
Maherin'ny 20%, 1,4 tapitrisa, dia miaina amin'izany faritra iva izany.
Ireny faritra menamena ireny dia faritra iva avokoa.
Raha jerenareo, dia miparitaka manerana ny renivohitra izy ireny.
Toy izao ohatra izany faritra iva ao Rio izany raha jerena.
Hita miavaka tokoa ny mpanan-karena sy ny mahantra.
Anio dia zavatra roa no tiako hasongadina mikasika ny faritra iva.
Ny voalohany dia ity,
afaka ovany avy amin'ny olana tsy misy fetra
ho vahaolana tsy manam-petra izy ireny.
Mba hatongavana amin'izany kosa
dia mila miditra any anatin'ireny faritra iva ireny,
mitondra ireo filàna fototra--
indrindra indrindra fa ny fanabeazana, ny fahasalamana -- manara-penitra.
Omeko ohatra maimaika ianareo.
Ity dia trano avo antitrantitra amin'ny faritra iva iray ao Rio --
[tsy dia mazava ny anaran'ilay toerana]
izay novainay ho sekoly ambaratonga fototra,
Ity dia toeram-piandraiketana ara-pahasalamana ifotony
izay naorinay tamina faritra iva iray,
manara-penitra ihany koa.
Toera-pitsaboana hoan'ny fianakaviana no iantsoanay azy.
Ny tokony atao voalohany dia ny fitondrana ny filàna fototra
amin'ireny faritra iva ireny
ary manara-penitra izany.
Ny teboka faharoa tiako hapetraka dia izao,
mila anokafana sehatra malalaka amin'ireny faritra iva ireny.
any amin'ny faritra iva, any amin'ny fokontany mahantra, n'aiza n'aiza misy anareo.
Rio dia manana tanjona tratrarina amin'ny 2020,
dia ny mba ho tanàn-dehibe tanteraka ny faritra iva ao aminy.
Ohatra iray hafa, ity toerana ity taloha dia feno trano,
avy eo izahay nanangana an'ity, izay antsoinay hoe toeran'ny fahalalàna.
Toerana misy ny teknolojia farany
ny ankizy mipetraka amin'ny trano manodidina ity toerana ity
dia miditra ao ary mampiasa ireo teknolojia farany izay misy ao.
Nasianay trano fijerena sary mihetsika mihitsy ary tao--ary sary mihetsika 3D.
Ary toy izany ny fiovana azonao amin'izany.
Ary mandra-pahariva ny andro dia betsaka nohon'ny loka "TED prize" no ho azonao amin'izany,
dia ny tsiky feno hafaliana
atolotry ny ankizy miaina amin'ireny faritra iva ireny.
Ny didy fahatelo apetrako aminareo anio
dia: ny tanàn-dehibe ho avy
dia tokony hampidirana ny resaka sosialy.
Tsy tokony hisy tanàn-dehibe
izay tsy manana ny lafiny sosialy mifampiditra aminy.
Mba ahafahako miampita amin'ny didy faha efatra,
Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony ho eto aho androany.
Ny vola novambra sy may, dia feno olona i Rio
Tamin'ny herin'andro ambony izahay dia tao anatin'ny Carnaval.
Nahafinaritra tokoa. Ary tena nampiala voly.
Eo koa ny fankalazana ny faran'ny taona.
Misy olona miisa 2 tapitrisa eo eny amoron-tsirak'i Copacabana.
Misy olana izahay.
Miady amin'ny fiakaran'ny rano izahay, ny oram-pahavaratra amin'izao vanim-potoana izao.
Azonareo an-tsaina ny hafalian'ny olona manana ahy
raha mijery izao zavatra ataoko izao.
Manana olana maro izahay nohon'ny oram-pahavaratra.
eo ny fihotsahan'ny tany, izay mampidi-doza.
Fa ny antony nahatonga ahy ho tonga eto
dia nohon'izany antony izany.
Zavatra niarahanay niasa tamin'i IBM
herin-taona mahery izay.
Izay antsoinay hoe "Foibe Fitantanana"
Ary tiako aseho anareo fa voafehiko ny fitantanana ny tanàna, amin'ny fampiasana teknolojia.
avy eto Long Beach,
tonga teto aho alina de fantatro daholo ny zavatra mitranga.
Aleo ho resahan-tsika izao ny momban'ny Foibe Fitantanana.
izy no mpiandraikitra ny raharaha an-drenivohitra any aminay.
Osorio, tsara ny miaraka aminao any.
Efa nilazako ny olona rehetra
fa misy oram-pahavaratra isika amin'izao vanim-potoana izao.
Manahoana ny toetr'andro any Rio any amin'izao ?
Osorio: Tasara ny andro. Mibaliaka ny masoandro androany.
Asehoko anareo ny "radar satellite" ny teotr'andro.
Somary mando kely fotsiny ny manodidina ny tanàna.
Tsy misy olana ara-toetr'andro ny ao an-tanàn-dehibe,
anio sy ny andro manaraka.
EP: Tsara izany, ary mahoana kosa ny fifamoivoizan'ny fiara?
Amin'ny vanin'andro toy izao izahay dia somary mitohana ny fifamoivoizana.
Manontany ny ben'ny tanana ny olona. Manahoana ny fifamoivoizan'ny fiara anio hariva ?
Osario: Mizotra tsara ny fifamoivoizana anio hariva.
Ndeha ho jerena ny iray amin'ireo bus 8000
Fampitàna mivantana avy ao an-tampon-tanànan'i Rio ho anao Andriamatoa Ben'ny tanana.
Hitanareo amin'izao fa malalaka ny làlana.
Efa amin'ny 11 alina izao any Rio.
Tsy misy olana ny lafin'ny fifamoivoizana.
Ho tantaraiko aminareo amin'izay ny zavatra rehetra nitranga androany.
Nikatso ny fifamoivoizan'ny fiara tamin'ny maraina teo
ny atoandro tamin'ny ora firavana ihany koa,
fa tsy dia nisy olana goavana.
Izao isika dia efa latsaky ny salan'isa
raha ny lozam-pifamoivoizana an-tanàn-dehibe no resahina.
EP: Mazava, asehoy anay kely hoe ny mikasika ireo raharaham-bahoaka.
Ireto ireo fiara.
Osorio: Izy indrindra, Andriamatoa ben'ny tanàna.
Indro asehoko anareo ny toerana fiantsonan'ny fiara mpaka fako.
Marihiko fa mivantana isika izao.
Misy GPS avokoa ireo fiara rehetra.
Ireo hitanareo mandeha ireny
manerana ny renivohitra.
Maka ny fako rehetra ara-potoana.
Mandeha tsara ny raharaham-bahoaka.
EP: Eny ary, Osorio, misaotra betsaka.
Amin-kafaliana lehibe ny fananana anao aty.
Handroso isika ahafahana mametraka ny teny famaranana.
Eny, tsy misy fitahirizana an-taratasy eto ary tsy misy taratasy atao,
tsy misy elanelana, miasa andro aman'alina mandritry ny herinandro
Ny didy faha efatra hozaraiko aminareo eto androany hariva
dia: ny tanàn-dehibe rahampitso
dia mila ny fampiasana teknolojia eo anivony.
Tsy mila eny an-toerana akory ny fitantanana ny tanàna.
Fa ny zavatra rehetra nolazaiko androany, ireo didy voalazako ireo
dia fomba samihafa,
fitantanana tanàn-dehibe --
mampiasà vola amin'ny fanorenana fotodrafitrasa, mampiasà vola amin'ny tontolo iainana,
manokafa kianja filalaovana sy toerana malalaka,
ampidiro ny lafiny sosialy, ampiasao ny teknolojia.
Fa raha zohina, rehefa miresaka tanan-dehibe isika,
dia miresaka fampifandraisana ny olona
ary tsy tokony izany no olana.
Raha misy 3,5 lavitrisa amin'izao,
hiakatra 6 lavitrisa izany ary ho tonga 10 lavitrisa.
Tsara tokoa izany, satria midika fa
10 lavitrisa ny saina miara miasa,
10 lavitrisa ny talenta mitambatra.
Ny tanàn-dehibe ho avy,
fa ho tanàna liana amin'ny mponina ao aminy,
mampifandray ny lafiny socialy ny mponina ao aminy.
Ny tanàn-dehibe hoavy dia tanàna tsy mamela ny olona
any ivelan'ny fety lehibe, izay antsoina hoe tanàn-dehibe.
Mayor Eduardo Paes is on a mission to ensure that Rio's renaissance creates a positive legacy for all its citizens. Full bio »	Translated into Malagasy by Andriankoto Ratozamanana	Reviewed by andry ravololonjatovo
More talks translated into Malagasy »
Views 331,075 | Comments 64
Views 594,223 | Comments 73
Views 425,791 | Comments 56
CitiesTechnologyTED PrizeUrban planning